Shaki xooggan oo hareeyey Shirka taliyayaasha CQS? | KEYDMEDIA ONLINE
Shaki xooggan oo hareeyey Shirka taliyayaasha CQS?
Taliyaasha Ciidamada Qalabka Sida, ayaa maanta shir uu ku gadaaman yahay shaki weyn ku yeeshay magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kulan shaki xooggan dhaliyay oo ay isugu yimaadeen Taliyayaasha Ciidamada Qalabka Sida, oo uu shir guddoominayay Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar), ayaa maanta ka dhacay Xarunta Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka.
Sida uu sheegay Taliye Xijaar, kulanka ayaa ah mid todobaadle ah, oo lagu kala qaato xogaha amniga dalka, Isla-markaana looga hadlay arrimaha amniga gaar ahaa kuwa doorshooyinka, hayeeshee, kaliya Xijaar ayaa ka joogay 9-ka xubnood ee Habraaca Amniga Doorashada uu qorayo in ay masuul ka yihiin Ammaanka.
Sida ku cad qodobka 4aad ee heshiiskii doorashooyinka dalka, oo ka hadlayay Amniga Doorashada (Election Security Protocol) Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa go’aamiyay in la dhiso guddi amni oo ka kooban 9 xubnood, masuulna ka ah amniga doorashada, uuna hogaaminayo Ra’iisul Wasaaraha XFS, xubnana ay ka yihiin Taliyayaasha Booliska Federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, iyo Taliyaha Booliska AMISOM.
Sidaas daraaddeed, ka soo qeyb galka shirka ee Taliyayaasha Ciidanka Xoogga, Asluubta iyo kuwa Gobolka Banaadir, ayaa abuuray shakiga, maadaama aysan qeyb ka ahayn 9-ka xubnood ee ku xusan Habraaca Amniga Doorashada Qaranka.
Kulanka waxaa ka qeyb qaatay Yaasiin Farey, oo dhawaan uu Farmaajo u magacaabay Agaasimaha Guud ee NISA, inkastoo xogo muhiim ah ay sheegayaan inuu kulanka uga qeyb galay jagada taliyaha Nabad-sugidda Gobolka Banaadir.
Shirka waxaa ka maqnaa Taliyaha Nabad-sugidda ee uu dhawaan magacaabay Ra’iisul Wasaare Rooble, Bashiir Goobe, taas oo sababtay walaac laga qabo Taliyayaasha Ciidamada oo intooda badan ku daaban Farmaajo isla-markaana amarka ka qaata eedeysane fahad Yaasiin, oo majaha u haya Kooxda Farmaajo.
Xijaar oo isku dayaya inuu qaldo waaqaca bulshada, isla-markaana marin-habaabiyo shacabka ayaa yiri “Anigoo ah Guddoomiyaha Guddiga Amniga Doorashoyinka Qaran, ugana hooseeya oo masuul uga ah Ra’iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble, waxaan rabaa in aan sheego in meel fiican wax noo marayaan”.
Taliyaha Ciidanka Asluubta, Mahad Cabdiraxmaan Aadan (Taliye Shub), Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, Jenaraal Odawaa Yuusuf Raage, iyo Taliyaha Qeybta Guud ee Gobolka Banaadir Farxaan Qaroole, ayaa sidoo kale qeyb ka ahaa shirk aka dhacay xarunta NISA ee Maamo Khadiijo.